M/weyne Faroole iyo wafti wasiiro ah oo uu hogaaminayo oo dib ugu soo laabtay Puntland. – Radio Daljir
Nofeembar 18, 2009 12:00 b 0
Garowe, Nov 18 – Waxaa galabta dib ugu soo laabtay Puntland waftiigii ballaarnaa ee uu hoggaaminayey M/weynaha dawladda Puntland Dr. C/raxmaan Sh. Maxmed Faroole. Waftiga ayaa ka soo degay magaalada Garoowe ee caasimada dawladda Puntland.
Waftigaan oo muddooyinkii ugu danbeeyey ku maqnaa safar dalka dibaddiisa ah, ayaa galabta waxaa si heer sare ah garoonka ugu soo dhaweeyey mas?uuliyiin kala duwan oo ka tirsan golayaasha dawladda Puntland, maamulka gobolka Nugaal, midka magaalada Garoowe iyo dadweyne aad u tiro badan.
M/weynaha oo ay waftigiisa ka mid ahaayeen wasiirka Arrimaha Gudaha Puntland Gen. C/laahi Jaamac Ilkajiir, Agaasimaha guud ee madaxtooyada Puntland Cali Barre iyo xubno kale oo muhiim ah, ayaa loo sii galbiyey aqalka madaxtooyada mana jirin wax war ah oo ay waftigu saxaafadda siiyeen.
M/weyne Faroole, iyo waftiga uu hoggaaminayo ayaa muddooyinkaan ku sugnaa magaalada Nairobi ee wadanka Kenya halkaasi oo ay kulamo kula yeesheen madax ka tirsan beesha caalamka oo ay ku jiraan kuwa deeqaha bixiya, hay?daha QM midoobay ee fadhigoodu yahay Kenya, mas?uuliyiinta sar sare ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo madax dhaqmeedyada qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed.
Kulamadii ugu danbeeyeyna M/weynaha iyo waftigiisu waxaa ay la yeesheen M/weynaha dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed, kulankaasi oo is-fahmiwaa ku dhammaaday.
Maalinta berri ah ayaa lagu wadaa m/weynuhu in uu qabto shir saxaafadeed uu kaga xog-warramayo kulamadoodii dibadda gaar ahaanna is-afgaran-waagii dhaxmaray isaga iyo m/weynaha dawladda federaalka taasi oo lagu wado m/weynuhu in uu faahfaain dheeraad ah ka bixiyo.
Ma ahan markii ugu ugu horraysay ee mugdi noocaan oo kala ah soo kala dhaxgalo Puntland iyo dawladda federaalka Soomaaliya, laakiin hadda waxaad moodaa in ay xamaasad gaar ah wadato.
?M/weyne Faroole oo ka hadlay amniga & siyaasada Puntland, is-maandhaafka u dhexeeya Puntland & federaalka.
Bilayska Galkacyo oo xabadeeyey gaari joogsan waayey bar kontarool & darawalka gaariga oo ku dhaawacmay.